Apple Inoburitsa Beta 4 ye macOS 10.12.6 yeVagadziri | Ndinobva mac
Masikati ano macOS Sierra 4 beta 10.12.6 yakaburitswa yevanogadzira. Ichokwadi ndechekuti isu tese takatarisira veruzhinji vhezheni yeMacOS High Sierra uye handisi kunyepa kana ndikati isu tese tinoziva nezvayo kupfuura yazvino vhezheni yeMac OS. kufambira mberi nhanho yakanaka uye zvinokwanisika kuti uri kugadzirisa kwakaitwa mukushanda kwesisitimu pamwe neyakajairika bug fixes inosanganisirwa idiki inosara kuwedzerwa kune macOS Sierra isati yasvetukira kune itsva yekushandisa system yakapihwa naApple muna Chikumi 5 paWWDC.
Isu tanga tiri chinguva umo shanduro dze beta dzinopa izvo zvigadziriso zvebug uye zvishoma zvimwe, saka hatigone kutaura kuti nhau dzakasimbiswa. Kune rimwe divi isu tatove tichida kuyedza zvimwe zvezvinhu zvitsva zveiyo inotevera macOS uye ndosaka isu tese tinotarisira kune yeruzhinji beta yeiyo nyowani vhezheni kupfuura yazvino iyi.
Semazuva ese, zvirinani kugara kunze kweiyi beta vhezheni kana usiri mugadziri kusvikira iyo yeruzhinji vhezheni yaburitswa, sezvo isu tingave nevamwe kusapindirana dambudziko nemaapplication kana maturusi ebasa. Shanduro dze beta dzakaburitswa dzinowanzo gadzikana uye kusvika parizvino dzave, hadziratidze zvikanganiso zvinokanganisa mashandiro ehurongwa kana zvimwe zvakadaro, asi hatifanire kukanganwa kuti iwo beta shanduro uye zviri nani kungwarira navo kunyangwe kunyangwe vachiratidza kugadzikana kwakawanda uye vasinga wedzere maficha mukushanda kunogona kukanganisa mashandiro eMac.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » Apple inoburitsa macOS 4 beta 10.12.6 yevagadziri
Apple Pay ichava neyayo yekutanga 'Kurasikirwa neWallet Yako' chiitiko muSan Francisco
Kana iwe uchida simulators erori, iwe uchafadzwa neRori Simulator Europe 2 Premium